မြန်မာ့တပ်မတော်(လေ)မှ စက်မှုလက်မှုအရာရှိတစ်ဦး၏ ဘ၀ကောက်ကြောင်း အပိုင်း -(၁)မှ (၃)အထိ | မြတ်နိုင်
မြန်မာ့တပ်မတော်(လေ)မှ စက်မှုလက်မှုအရာရှိတစ်ဦး၏ ဘ၀ကောက်ကြောင်း အပိုင်း -(၁)မှ (၃)အထိ
ဆောင်းပါးရှင် – ဗိုလ်မျိုးသူရ
လေတပ်သားတစ်ဦး၏ ဘ၀ကောက်ကြောင်းကို စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဖတ်မိလို့ မကြာသေးခင်မှာဘဲ VOA အသံလွှင့်ဌာနက ထပ်မံပြီး ထုတ်လွှင့်ခဲ့လို့ လေတပ်လောကတစ်ခုလုံး သိမ့်သိမ့်တုန် တုန်ခါသွားပါတော့သည်။ တပ်မတော်(ကြည်း/ရေ/လေ)အတွင်းမှ အခြားအဆင့် စစ်သည်များသာ စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းမှု၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး၊ လစာနှင့် ရိက္ခာအပါအ၀င် အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စအရပ်ရပ် အဆင်မပြေမှုမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာမဟုတ်ဘဲ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်နဲ့အောက် အရာရှိ/အရာခံများလည်း ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ န၀တ၊ နအဖခေတ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လက်ထက်မှသည် ယခု သမ္မတခေတ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် လက်ထက်တိုင် စစ်သည်များနည်းတူ မတရားမှု၊ ခွဲခြားမှု၊ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မျက်ကွယ်ပြုမှု၊ တပ်မတော်၏ အမိန့်နာခံမှု ဟူသော စကားရပ်ကို ခုတုံးလုပ်ကာ ဖိနှိပ်တားမြစ်ထားမှုများအား ခံစားနေရကြောင်းကို မြန်မာ့တပ်မတော်(လေ) ၏ အရာရှိများကိုယ်စား သိသင့်သိထိုက်သူများထံ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
တင်ပြပါ အချက်များသည် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ အရာရှိများ၊ နယ်ဘက် ဌာနများသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားသော အရာရှိများ၏ အချက်အလက်များကိုပါ စုစည်းထားသောကြောင့် ထိုအရာရှိများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ငှဲ့ကွက်သောအားဖြင့် တပ်နာမည်၊ စခန်းဌာနချုပ်တည်နေရာ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အချို့များအား လွှဲပြောင်းထားခြင်းမှအပ ၂၀၁၁ မေ လကုန်အထိ တပ်မတော်(လေ)မှ Up to Date အဖြစ်မှန်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
လေတပ်သားတစ်ဦး၏ ဘ၀ကောက်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပြီးနောက် ၄င်းဖြစ်စဉ်ပါ စစ်သည်က လက်နက်လုပ်ငန်းမှဟု ဆိုခဲ့သဖြင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်း (လေချုပ်) မှ စက်မှုလက်မှု ဌာနခွဲအောက်ရှိ လက်နက်လုပ်ငန်းမှ အရာရှိ/စစ်သည် များအား အပြင်းအထန် စိတ်ဆိုးကာ စစ်ဆေးအရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော သာဓကများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တစ်ဦးချင်းဘ၀ထက် အားလုံးကို ခြုံငုံကာ တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ယခုတင်ပြချက်ပါ စက်မှုလက်မှု အရာရှိများသည် တနတ ခေါ်တပ်မတော် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဆင်းမဟုတ်သော ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (Officer Training School) ဆင်း (၀ိဇ္ဇာ၊သိပ္ပံတက္ကသိုလ် – Bsc. BA) ရိုးရိုးဘွဲ့ရ အရာရှိများ၏ ဘ၀ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း ဆင်းပြီးနောက် တပ်မတော်(လေ)တွင် စက်မှုလက်မှုအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် အရာရှိများသည် မိတ္ထီလာမြို့၊ မြေပြင်အတတ်သင် လေတပ်စခန်းရှိ စက်မှုလက်မှု အတတ်သင်ကျောင်းတွင် စက်မှုလက်မှု အရာရှိ သင်တန်းကို အင်ဂျင်နီယာ၊ လျှပ်စစ်နှင့်ချိန်ခွက် (Electric&Instrument)၊ လက်နက်စသော လုပ်ငန်း သုံးမျိုးသည်လည်းကောင်း၊ အီလက်ထရောနစ် အတတ်သင်ကျောင်းတွင် ဝေဟင်အီလက်ထရောနစ် (ယခင်ရေဒီယို/ ရေဒါ) လုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း (၂၄) ပတ်ကြာ သင်တန်း တက်ရောက်ကြရပါသည်။
စက်မှုတက္ကသိုလ် B.E ဘွဲ့ရများကို အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အထက်ပါ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဆင်း ဘွဲ့ရများကို လျှပ်စစ်အရာရှိ/ လက်နက်အရာရှိ/ ရေဒီယိုအရာရှိများ အဖြစ်လည်းကောင်း ခွဲခြား တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် လေသူရဲ တောင်ပံတပ်ဆင်ခွင့် မရခဲ့သော DSA ဆင်း အရာရှိတချို့ကိုလည်း လက်နက် အရာရှိများအဖြစ် တာဝန်ပေး သင်တန်း တက်စေခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (DSTA) ဆင်းများ မရောက် လာမီအထိ စက်မှုလက်မှု ဌာနခွဲအောက်မှ ထိုလုပ်ငန်း (၄) မျိုး၏ အရာရှိများသည် တပ်မတော် (လေ) ၏ ထုံးစံအတိုင်း လေသူရဲများနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေး (လေသူရဲများကိုသာ တာဝန်ပေးသော အုပ်ချုပ်ရေး တပ်မှူး၊ ဒုစခန်းမှူး၊ စခန်းမှူး/ ဌာနချုပ်မှူးများ မဖြစ်သည့်တိုင်) များမရသည့်တိုင် မိမိတို့လုပ်ငန်းအလိုက် ဦးစီး(ပ)များ၊ တပ်မှူးများ အဖြစ် အဆင့်ဆင့် တာဝန်တိုးယူ ထမ်းဆောင် လာခဲ့ကြပါသည်။
ထိုအထဲတွင် B.E ဘွဲ့ရများအနက် electrical နှင့် ပြီးသူများအား လျှပ်စစ် အရာရှိများ အဖြစ် ခန့်အပ်ထားခြင်းလည်းရှိရာ လက်နက်နှင့် ရေဒီယို အရာရှိများအားလုံးမှာ DSTA အပတ်စဉ် (၁) ကျောင်းမဆင်းမီအထိ B.Sc ဘွဲ့ရများချည်းသာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် လေသူရဲများဘက်မှ DSA ၄၁ နှင့် ၄၂ ဆင်းများအား အရေအတွက်များစွာ ခေါ်ယူခြင်းနှင့် အတူ DSTA ဆင်းအင်ဂျင်နီယာ အရာရှိများလည်း တပ်မံ အင်အားဖြည့်သည့် အတွက် ကက (လေ) မှ တပ်မတော် (လေ) ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တပ်ချုပ်ကြီးထံ တင်ပြရန် ကိစ္စပေါ်လာပါသည်။
တပ်ချုပ်မှ လေယာဉ် အတင်း ထုတ်လုပ်ခိုင်းနေခြင်းအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူကာ ယခင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လေတပ်စခန်း (လပထ) အား လေယာဉ် ထုတ်လုပ်ပြင်ဆင်ရေး ဌာနချုပ် (လထခ) အဖြစ် ပြောင်းလဲကာ စက်မှုလက်မှုအရာရှိ (အင်ဂျင်နီယာ) များကြီးစိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဌာနချုပ်မှူး (ဗိုလ်မှူးချုပ်) အပါအ၀င် အင်ဂျင်နီယာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းသော တပ်ကြီးအဖြစ် ထိုစဉ်က စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး (စက်မှုလက်မှု) ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး လှိုင်ဘွားက ဆောင်ရွက်ပါတော့သည်။ သူ၏ စီမံချက်တွင်လက်ရှိ လက်နက်နှင့် ရေဒီယိုအရာရှိများ အတွက်လုံးဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မပြုခဲ့ပဲ ရာထူးအဆင့်ဆင့် အတွက် ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ် ချက်တွင် အင်ဂျင်နီယာ B.E ဘွဲ့ရများဟု သတ်မှတ်ရေးဆွဲ ထားခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က ဦးစီး (ပ) လက်နက်၊ ဦးစီး (ပ) အီလက်/ တယ်လီ နှင့် ဦးစီး (ပ) လျှပ်/ချိန် တို့က အရာရှိများ ခါးဆက်မပြတ်စေရန် ထိုသတ်မှတ်ချက် များအပေါ် ကန့်ကွက်သော်လည်း ဗိုလ်မှူးကြီး လှိုင်ဘွားသည် သူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဖြစ်ရေး အတွက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) အား နားချကာ တပ်ချုပ်သို့ တင်ပြစေခဲ့ပါသည်။
သူ့စီမံချက် အတိုင်းပင်ဖွဲ့စည်းပုံ အတည်ပြုချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးချုပ် လှိုင်ဘွားအဖြစ် လထခ ကို ဦးဆောင်ခွင့် ရခဲ့သော်လည်း ၁၉၉၄ တွင် အရာရှိဖြစ်လာခဲ့သော လျှပ်စစ် အရာရှိအချို့၊ ရေဒီယိုအရာရှိ အချို့နှင့် လက်နက် အရာရှိအားလုံးတို့မှာ ယနေ့တိုင် ခွက်ပျောက် စစ်ဗိုလ်များဘ၀သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြရပါသည်။ အရေအတွက်အားဖြင့် (၃၀)ဦး ခန့်သာ ရှိသည်ဟု ဆိုစေကာမူ တပ်မတော်(လေ)၏ အနေအထားအရ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက် မှုနှင့် လက်ရှိ တာဝန်ယူထားရမှု အခြေအနေများအရ လေယာဉ်များ၏ လက်နက်စနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်များအတွက် အားထားရသူများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လေတပ်သားတိုင်း စိတ်ဝင်တစားဖြင့် သူတို့ ၏ ရှေ့ခရီးကို သိချင်နေကြသော ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုအရာရှိများအား အဆင့်တိုးတင်ရန် အချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရ B.E ဘွဲ့ရမှသာ တင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ချန်ထားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ခါးဆက် ပြတ်မည်စိုးကာ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးအရာရှိ (ပထမတန်း) များအား ကာယကံရှင်များသို့ အသိမပေးခိုင်းဘဲ အကယ်၍ သိသွားသည့်တိုင် အနည်းငယ် နောက်ကျကာ ကြိုးစားပေးမည်၊ စောင့်ပါဟု နှစ်သိမ့်ပြောရန် လက်ရှိလေချုပ်မှ ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကြံရည်ကြိတ်စက်မှ ကြံဖတ်များအား အကြိမ်ကြိမ် ထည့်ကာ အရည်ညှစ်သည့် နည်းတူ မိမိတို့အား အချိန်ဆွဲ အသုံးချနေမှန်း ရိပ်မိလာသော ထိုအုပ်စုမှ အရာရှိတချို့သည် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် တပ်မတော် (လေ) မှ ထွက်ခွါရန် ပြင်ဆင်လာပါတော့သည်။
ထိုအရေးကိစ္စအား တားဆီးနိုင်ရန် ၂၀၁၀ မတ်တွင် တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ထောက်ခံချက် ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၉ အတွင်း အရာရှိ ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိဗိုလ်ကြီးအဆင့်တွင် ရှိနေသူများ အား အဆင့်တိုးပေးရန် ရှိသည် ဆိုကာ တောင်းခံမှု ဆောင်ရွက်ပြခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း မည်သို့မှ ထူးမလာပဲ၊ အင်တာနက်ပေါ်မှ လေတပ်၏ ရင်ဖွင့်သံများသည် ထိုအရာရှိများ၏ လက်ချက်ဟု စွပ်စွဲကာ အချို့သော အရာရှိများ စစ်ဆေး အရေးယူ ခံခဲ့ရသည်အထိ မဆီမဆိုင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့သော်လည်း မကြာခင်ကမှ ဗိုလ်မှူးအဆင့် တိုးပေးရာတွင် မပါသော DSA ၄၁ နှင့် ၄၂ မှ အရာရှိများက ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး အဆင့်တိုး မပါသောကြောင့် တပ်မှထွက်ရန် နှုတ်ထွက်ခွင့် တင်ကြသောအခါ သံသယသည် ထိုအရာရှိများဘက်သို့ ဦးလှည့်သွားကာ ခွက်ပျောက် စစ်ဗိုလ်အုပ်စုမှာ အသက်ရှူနိုင် ကြပါတော့သည်။ အမှန်တရားသည် မည်သူမဆို ဖော်ထုတ်တင်ပြ နိုင်သည်ကို မေ့ထား သောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ရှေ့နောက်မဆင်ခြင်သော၊ လက်တန်းဆောင်ရွက်သော၊ စည်းစနစ်မကျသော ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် တပ်မတော် (လေ) အတွက် ဆုံးရှုံးမှုများစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ လေယာဉ်နှင့် အပိုပစ္စည်း ၀ယ်ယူရေးတွင် လေတပ်၏ သဘောသဘာဝ ကိုနားမလည်သော ကက(ကြည်း) ၏ ထိန်းချုပ် စွက်ဖက်မှုများကြောင့် Serviceable မဖြစ်တော့သော လေယာဉ်များ၊ လေသူရဲ/ အင်ဂျင်နီယာ စသောလေတပ်သား တို့နှင့် စပ်ဆိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းဝင်ခြင်း၊ နီးစပ်မှု လုံးဝ မရှိသော ကာလကြာရှည် ကြည်းတပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းအချို့ကြောင့် ပြန်လည်လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်နေရပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းများတွင် အချိန်ကုန် စိတ်ပန်း ကာ နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်အတွက် နစ်နာမှုများကား စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ် တင်ပြချက်များစွာတွင် ဖတ်ရှုခဲ့ရလို့ သိရှိခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယခု တင်ပြချက်များသည်လည်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ်ပါ ငယ်သားများအပေါ် ပြုကျင့်ရမည့် ကျင့်ဝတ်များအား အလေးမထားရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဟု ဆိုချင် ပါသည်။ ငယ်သားများအား ကျောသား၊ ရင်သားမခွဲခြားပဲ တရားမျှတစွာ ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်သည် ဆိုပါလျှင် လေသူရဲချင်း အတူတူ MiG – 29 နှင့် F-7 လေသူရဲများအတွက် တိုက်ရိုက် အပွင့်တင် စနစ် (ဗိုလ်မှူးအဆင့်မှ စကာ Officiating ကာလ ၁ နှစ်မရှိပဲ ၄င်းတို့က အပွင့်တင်ပြီးနေခြင်း) ထားရှိခြင်း၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် လေသူရဲအဆင့် ရာထူးတိုးရန်ထောက်ခံမှုတွင် ပြစ်မှုရှိသောလေသူရဲအား ထောက်ခံပြီး အလားတူ ပြစ်မှုရှိသော အင်ဂျင်နီယာအား တင်မပေးခြင်း၊ အရေးယူရန် ရှိပါကလည်း လေသူရဲများအား သက်ညှာခြင်း၊ မသိယောင်ဆောင်ပေးခြင်း စသော အက်ကြောင်း ထင်နေမှုများ မလုပ်သင့်ကြောင်း ဝေဖန်သုံးသပ်လိုပါသည်။ ထိုသို့သော ခွဲခြားမှုများကြောင့်လည်း အပိုင်း – ၁ တွင် တင်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း သာမန် B.Sc ဘွဲ့ရကာ ၁၉၉၄ တွင် အရာရှိ ဖြစ်လာခဲ့သော လျှပ်စစ်အရာရှိ အချို့၊ ရေဒီယို အရာရှိအချို့နှင့် လက်နက်အရာရှိ အားလုံးတို့မှာ ယနေ့တိုင် ခွက်ပျောက် စစ်ဗိုလ်များ ဘ၀သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြရပါသည်။
ထိုအရာရှိများသည် ၁၉၉၈ တွင် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရခြင်းသည် သူတို့ဘ၀အတွက် နောက်ဆုံး အဆင့်တိုးခြင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ လူတိုင်းတွင်မျှော်လင့်ချက် ကိုယ်စီရှိကြသကဲ့သို့ ထိုမျှော်လင့်ချက် ကြောင့်ပင် ရှင်သန် ရပ်တည်နေနိုင်ကြပါသည်။ ၄င်းအရာရှိ အားလုံးအား B.E ဘွဲ့ရမဟုတ်က အဆင့်တိုး မပေးနိုင်တော့ဟု သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီး (ပ) များမှ အသိပေးခဲ့သော်လည်း၊ ရှေ့ရေးအတွက် အစီအစဉ်ကိုမူ ထိုအရာရှိကြီးများ ကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ပြင် မျိုးဆက်သစ် DSTA ဆင်းအရာရှိများကို ရိုးရိုးဘွဲ့ရ အရာရှိများက လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြားပေးရမည်ဟု ဖိအားပေး ခိုင်းစေလာပါသည်။ ထိုရိုးရိုးဘွဲ့ရ အရာရှိများဘက်တွင် ကိုယ်ချင်းစာ ခံစားပေးမည် ဆိုပါလျှင် မည်သို့ရှိပါမည်နည်း။ ရာထူးအဆင့်တိုးရန် မရှိတော့ဟု သိထားသော ထိုအရာရှိများအပေါ် မျိုးဆက်သစ် (DSTA) တို့ကရော ထိုအရာရှိများ၏ သင်ကြားပေးမှု အပေါ်မည်သို့ တုန့်ပြန်မည် ထင်ပါသလဲ။ ထိုအရာရှိများသည် တပ်မတော် (လေ) တွင်ဗိုလ်ကြီးဘ၀ဖြင့် အငြိမ်းစား မယူမချင်း (သို့) မထွက်မချင်း နေသွားရပါက မည်သို့သော ပြဿနာရပ်များ ဖြစ်လာနိုင်ပါသနည်း။ ထိုအချက်များအား လေချုပ် အဆက်ဆက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားမပေးခဲ့ကြပါ။
သို့သော် လေချုပ်နှင့် ကျန်အရာ၇ှိကြီးများ စဉ်းစားသည်မှာကား ငယ်သားများအပေါ် သစ္စာစောင့်သိကာ အပြည့်အ၀ ယုံကြည် အားကိုးရန်ထက် ထိုခွက်ပျောက် အရာ၇ှိများ၏ တင်ပြလာချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ချက် များ၊ ပြောဆိုချက်များ အပေါ်သံသယဖြင့် စောင့်ကြည့် သုံးသပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာရှိ အုပ်စုမှ အချို့မှာ ဆေးခုံရုံးဖြင့် လည်းကောင်း၊ အရပ်ဘက် ၀န်ကြီးဌာနများသို့လည်းကောင်း၊မိမိဆန္ဒ အလျောက် နှုတ်ထွက်ခွင့် တင်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း အဆင်မပြေမှု အခြေအနေများမှ ရုန်းထွက်သွားကြ သကဲ့သို့အချို့ကမူ အကြီးအကဲများအပေါ် သစ္စာရှိစွာဖြင့် မိမိတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကောင်းမှု အကျိုးအတွက် ကောင်းမွန်သော စီစဉ်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်နိုးဖြင့် မျှော်ကိုးကာ စစ်သက်များစွာ ငယ်သော DSA ၄၁ နှင့် ၄၂ မှ ဗိုလ်မှူးများအား အောင့်အီး အလေးပြုကာ ရင်နာစွာ ရှိနေကြပါသေးသည်။
တပ်မတော်တွင် အဆင့်တိုးရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမခံရသူများသည် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ပြစ်မှုမှတ်တမ်းအရ ဖယ်ထုတ်ခံထားရမှသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အနေကြာရင် Major တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟူသော စကားအရ ဗိုလ်မှူးအဆင့်လောက်ထိ ပြစ်မှုမကြီးက ဖြစ်နိုင်သည်ကို တပ်မတော်သားတိုင်း နားလည်ထားပါသည်။ ယခုဖြစ်စဉ်မှာမူ ထိုအရာရှိ အားလုံးနီးပါးသည် ပြစ်မှု ကင်းရှင်းသည်သာမက အချို့မှာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလွှာ ရထားသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင်သာမက အခြားသော တပ်မတော် (လေ) ၏ ကောင်းကျိုးများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သူများ၊ အုပ်ချုပ် စီမံမှုကို နိုင်နင်းပိုင်နိုင်သူများ ဖြစ်နေသည်မှာ ထူးခြားမှုဖြစ်ပါသည်
ထိုသို့ဆိုလျှင် “ငယ်သားများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ ပျော်ရွှင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စရပ်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါ….” ဆိုသော ကျင့်ဝတ် ၆၀ ပါ အချက်များအနက် ဗိုလ်ကြီးဘ၀ဖြင့် ခွက်ပျောက်နေသော စက်မှုလက်မှု အရာရှိ အုပ်စုအတွက် အောက်ပါ မေးခွန်းများကို ဖြေရန် တာဝန်ရှိသူများ စဉ်းစားသင့်ပါသည်-
(က) တပ်မတော်(လေ)၏ အရာရှိ/စစ်သည် အင်အား၊ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ရှိပါသလား?
(ခ) နှစ်ကုန်တိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးပို့နေသော အရာရှိ အတွင်းရေး အစီရင်ခံစာ ထူး – ၃ နှင့် ထူး – ၄ များ အပေါ် အမှန်တကယ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား?
(ဂ) ပြစ်မှုမှတ်တမ်းရှိသော ကျန်အရာရှိများက ဗိုလ်မှူး/ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဖြစ်သွားသည့်တိုင် အင်ဂျင်နီယာမဟုတ် ဟူသော သတ်မှတ်ချက်အောက်မှ ခွက်ပျောက်စစ်ဗိုလ်- ၀ါရင့်ဗိုလ်ကြီးများ အတွက် ပြစ်မှုမှတ်တမ်းသည် အရေးမပါသောသဘော သက်ရောက်နေပါသလား?
(ဃ) ထိုအရာရှိများ၏ မိသားစု၊ အထူးသဖြင့် သား/သမီးများက ဖခင်ဖြစ်သူအား“ရာထူးအဆင့်တိုး မလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောမေးခွန်း” အပေါ် လေချုပ်ကြီးသာ ထိုအရာရှိများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါက မည်သို့ပြန်ဖြေပါမည်နည်း?
(င) ထိုသို့သော အရာရှိများအပေါ် သံသယထား ဆက်လက်ခိုင်းစေနေမည့်အစားနှစ်ဦး နှစ်ဘက် အဆင်ပြေစေရန် တပ်မတော် (လေ) တွင် မထားခြင်းက ပိုမို ကောင်းမွန်ကော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသလား?
(င) အထက်အောက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်ရသော တပ်မတော် ထုံးစံအရ စစ်သက်များစွာ ကွာခြားသော Junior က ရာထူးအဆင့်အရ နိမ့်နေသော Senior ထိုအရာရှိများ အပေါ် ဆက်ဆံရေး ကိုလည်းကောင်း၊ မိမိ ပြစ်ချက်ကြောင့် မဟုတ်ပါပဲ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ချင်းခြင်း၏ သားကောင်ဖြစ်ရသော ထိုအရာရှိများအပေါ် စစ်သည်များ၏ အမြင်ကိုလည်းကောင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှု၊ စစ်ဘက်အခမ်းအနား နေရာယူမှုများတွင်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အဆင်မပြေမှုများ၊ ပြဿနာများ ကိုလည်းကောင်း စဉ်းစားမိပါသလား?
(စ) လေတပ်ထဲမှ အက်ကွဲသံများ၊ ကောက်ကြောင်းများသည် အိပ်မက်မဟုတ်၊ လုပ်ဇာတ်မဟုတ်၊ ဖန်တီးချက်များ မဟုတ်ပဲ ဖြစ်ရပ်မှန်များ ဖြစ်ကြောင်း လေတပ်လောက တစ်ခုလုံးက မှတ်ချက်ပေးထားပြီး ဖြစ်ရာ လက်အောက် ငယ်သားများ၏ တင်ပြချက်များကို အရေးတယူ မှတ်သား ပြီး၊ လေချုပ်အနေဖြင့် စံနမူနာကောင်းပြကာ အခြေအနေ မှန်အတိုင်း တပ်ချုပ်ကြီးထံ တင်ပြရဲရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အနစ်နာခံကာ မှန်ကန်စွာ ခေါင်းဆောင်သင့်သော အချိန်အဖြစ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါပြီလော?
အထက်ပါ မေးခွန်းများအတွက် မှန်ကန်သော အဖြေများ ထွက်လာမည်ဟု ယုံကြည် မျှော်လင့်ပါသည်။ တင်ပြခဲ့သော အရာရှိများနှင့် ဘ၀တူ ခံစားနေရသော လေသူရဲအချို့၊ လေကြောင်း အချက်ပြနှင့် လမ်းပြအရာရှိအားလုံး တို့လည်း ရှိပါသေးသည်။ အခြားသော တပ်ဖွဲ့များတွင်လည်း ရှိနေနိုင်သော်လည်း တင်ပြပါ အရာရှိ အုပ်စုမှာမူ ထူးခြားစွာ ကန့်သတ်ချက်များ ကျန်ရှိ နေခြင်းကြောင့် အားလုံးသိရှိ နိုင်စေရန် ရွေးထုတ်တင်ပြ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၁ မတ်လ အကုန်တွင် ပြောင်းလဲမှုများ ရှိလာသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ အရပ်ဘက် ဌာနများတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ၀တ်စုံဝတ်ထားသော ဦးသန်းရွှေ ဓါတ်ပုံကို ဖြုတ်ရန် မည်သူမျှ အမိန့်မပေးသလို လက်ရှိ ၀န်ကြီးများ၏ တွေ့ဆုံပွဲ ဆိုသော အခမ်းအနားများ ခေါင်းစီးစာတန်း အထက်တွင် ဦးသန်းရွှေ၏ ဓါတ်ပုံကြီးထဲမှ မိန့်မိန့်ကြီး ကြည့်နေဆဲရှိနေပါသည်။ တပ်ချုပ်အသစ်ပါ ဆိုသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည်လည်း ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်လော၊ ခိုင်းစေချက်လော မသိရသော လက်တန်း ဆောင်ရွက်ချက်များ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုထိုသော အကြီးအကဲများ၏ လုပ်ဆောင်မှုအောက်မှ သားကောင်ဖြစ်ရသော တပ်မတော်သား အရာရှိ/စစ်သည်များ၏ ဘ၀ကို သိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်ဖော်ထုတ် တင်ပြအပ်သည်။